Biography Denisa Lebedeva ugcwele zokunqoba ezemidlalo elikhanyayo kanye nokunqoba. Lokhu boxer uyisibonelo okucacile omoya Russian nentando. Lapho kuxoxwa, Lebedev ukuthi kulula ukubulala kuka ukuze asuse ibhande iringi. Nale asikwazi ziyavuma! Boxing Denis Lebedev biography neze uyazi ukwehluleka kanye ukuhlulwa, ngaphandle kwababili. Phakathi umsebenzi wakhe, walahlekelwa kabili kuphela - 5-isikhathi iqhawe emhlabeni German Marco Hook (nakuba abaningi babekholelwa ukuthi le mpi kwadingeka ukuba anqobe baseRussia) kanye compatriot Murat Gassieva (ukuzivikela lokuqala IBF isihloko Lebedev).
Denis Lebedev: Biography futhi umsebenzi
Idolobha lasekhaya Denis - kuyinto Stary Oskol, lapha yena wazalwa ngo-August 14 1979. nomkhaya wakhe babematasa zonke uboshelwe ezemidlalo - uyise nomfowethu omdala babe okwakwenza abashayi-sibhakela, nonina - womzimba. Ngesikhathi eseneminyaka eyisithupha, Denis bajoyine ingxenye ezemidlalo yokuzijwayeza, kodwa ngemva kweminyaka embalwa yajikijela ezemidlalo waqhubeka isibhakela. Lapha ngafunda ngokushesha futhi waqala ukubonisa imiphumela emihle. Ngakho, ngo-1997, waya amateur European Championship e Birmingham (England), lapho eyenzeka kuqala.
Eminyakeni embalwa kamuva lenyuswa wezempi, ku CSKA (Central Yezemidlalo), lapho uyaqhubeka ukuqeqesha kanzima futhi ulungiselela amathuba okuba umculi okhokhelwayo.
Ngemva demobilization waqala ukwenza ekukhanyeni division sosondonzima. Kusukela 2001 kuya 2004, wachitha 13 izimpi enqobile, ngemva kwalokho banquma ukushiya ibhokisi elikhulu. Njengoba kwaphawula Denis, yena wenza isiqunto esivuna umndeni.
Denis Lebedev biography nomndeni
Esikoleni, Lebedev wahlangana uthando lwakhe. Igama lakhe u-Anna, yena unesithakazelo umculo futhi wazi zonke imithetho isibhakela ngekhanda. Lo mbhangqwana onamadodakazi amathathu ngubani zihilelekile kwezemidlalo. Ngo izingxoxo eziningana Denis Lebedev umangalele ukuthi ukusekela best livela umkakhe, okuyiwona uyakwazisa futhi iyamthanda. Ezemidlalo biography Denis Lebedev (umndeni boxer e-isithombe ngezansi) kwaphazanyiswa iminyaka 4 (2004 ukuya ku-2008) ngenxa yokuthi lo msubathi uye wanquma ukuchitha ekhuthalele endlini, kunokuba ukuqeqeshwa.
Denis Lebedev okwamanje
Kuze kube manje, boxer abahlala edolobheni laseChekhov (Moscow Oblast). Lebedev uyaqhubeka ukuba baqeqeshe futhi ukufundisa amadodakazi abo futhi ukujabulisa umkakhe amthandayo.
Ngesinye isikhathi, ezololongwa Denis Russian ex-boxer nezobuchwepheshe Kostya Dzyu. Bebonke, bakusekela baphumelele Amazing, zishaya izimbangi ezifana Roy Dzhons, Dzheyms Toni nabanye abaningi. Okwamanje, Umqeqeshi Lebedev kuyinto onguchwepheshe American Freddie Roach.
Biography Denisa Lebedeva, ukuphila kwakhe siqu sewusungule ngempumelelo (isithombe kusuka umndeni ngezansi), iyaqhubeka ikhula nge ezemidlalo nokufeza umndeni. Rumour has it ukuthi umsinga WBA iqhawe Denis Lebedev futhi elinde replenishment emkhayeni.
Duel Lebedev vs. Dzheymsa Toni
Mina isingathwe belwa oneminyaka engu-32 ubudala Russian Denis Lebedev futhi oneminyaka engu-43 abanokuhlangenwe nakho waseMelika uJames Toney eMoscow ngo November ka 2011. I iziqubu kwadingeka ubunjalo wokulwela zesikhashana ukuze WBA isihloko emhlabeni. Le mpi kulindeleke yibo bonke! Kwezemidlalo biography Denis Lebedev namanje wayengafani lokhu - ikakhulukazi abaphikisi ilahlekelwe 27 amakhilogramu ukuze luhambisane esigabeni isisindo zabantu baseRussia. Ngaphambi impi baseMelika baziphathe, uveze amaqiniso njengoba enjalo, futhi alubonisi ubuluhlaza, abadelelayo ihlupha futhi iluhlaza. Yaklebhula ukuvula ukusebenzisa ezimbalwa, ngokuphindaphindiwe ashaqisayo nabezindaba Russian, kanye Iziqalekiso uzwakalise unomphela futhi ngokweqile Flamboyant baziphathe ngesikhathi nesisindo-e. Izilinganiso ngubhuki esabonisa ngokucacile ukuthi Denis Lebedev kubhekwa intandokazi kule game.
Kusukela imizuzu yokuqala okwakwenza abashayi-sibhakela waqhubeka ngokushesha benana ambalwa punches ezinhle. Noma kunjalo, iminyaka ethile yafeza indima ebalulekile: isheshe Denis kwaba, ogcina ngakho inzuzo kubo bonke imizuliswano. Tony yena, ababonisa ngayo amakhono esihle ezivikela, futhi yabonisa ekilasini inkosi kuhlasela esiphikisayo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi kunzima American Denis Lebedev ikhokhwe inombolo enkulu yokufa uhlangothi, futhi ngaleyo ndlela iwine ukulwa.
Le mpi edume ngokumelene wazibonela American Roy Jones
Ngo-May 2011, i-boxer Denis Lebedev wathola ilungelo ukulwa ne legend engu-42 ubudala isibhakela ezweni.
Phakathi ukulwa abaseRussia njalo wabusa, kodwa ngezikhathi ezithile ekuphenduleni ebuhlungu wathola "Punchy". Ngo round wesine Denis ncamashi wamanga ubuso Jones, wawela phansi eceleni komgwaqo - kwaba ubufakazi lokuqala impumelelo. Ngaphezu kwalokho imizuliswano alinganiswe futhi okufanayo, kodwa lesishiyagalolunye kwakushiyelwa yaseMelika - Lebedev uphuthelwe buhlungu lobukhulu, kodvwa bonke abantu babengathola ncamashi ukusinda. Esiwujuqu kwaba round yeshumi: boxer Russian aphethwe uchungechunge isibhamu ezinhle, ngemva kwalokho Roy kwaba ngo "knockdown simile 'Dennis sabuka umahluleli wathi wayefuna ukuyeka ukulwa manje. Ngenxa yalokho, i-Lebedev yokugcina osebenzelana buhlungu enamandla, futhi Jones uwela phansi iphinifa esiyingini. Kwakuyisikhathi amahle esindayo Knockout ekunqobeni boxer Russian. By the way, uRoy Jones ayikwazanga avuselele imizuzu eyishumi.
Izesekeli kanye Tuning "Mitsubishi Autlender 3" (Mitsubishi Outlander)
Indlela yokwenza mini-Excavator ngezandla
Ficus microcarpa - kwendle isitshalo-miniature